mhando 1.0.3 – Sei musinganzwisisi kunditumira mashoko?
Nyamavhuvhu 5, 2018 kubudikidza chipo Leave a Comment
Tiri kufara kuzivisa Newest shanduro, akasunungura zuro.
Shanduro iyi iri zvose pamusoro tsamba chikabviswa, uye munhu shanduro utariri kuvandudzwa.
The tsamba Pakanzi chichabatsira arun kuti Notifications neshanduro evanhu akaita kuti nzvimbo, ari pachena shanduro uchawana shoko panongopera shanduro itsva neawakatumirwa. In zvizere shanduro une tsanangudzo kubvumira mashoko kuti Buffer (saka iwe uchawana shoko chete pashure mukomana aishandisa kunge rakashandurwa zvimwe hungiso panzvimbo). Une tsanangudzo kugamuchira zuva gaya shanduro itsva yakaitwa kuti nzvimbo. Unogona kusarudza kero mashoko achatumirwa, chete kuzvisiyira varara kuti mutariri imeiro.
Chimwe chinhu kuti kwakavandudzika pamusoro Shanduro iyi mupepeti backend rokushandura, vachiri tisingabvumiri kuti chaizvoizvo kushandura pamusoro backend, zvino unogona utarisire shanduro nyore nokushandisa mupise chinhu chakawedzerwa uye unorema zviito kuti ikozvino chaizvoizvo kushanda. 🙂
Tinotarisira kunzwa zvinoshandisa pakurima dzako, uye tinovimba uchanakidzwa kusunungurwa chitsva ichi
Ina Under: General Messages, Release zviziviso, Software Updates
mhando 1.0.2 – Ndiudze kwamunobva uye ndicharwa…
Chikunguru 22, 2018 kubudikidza chipo 2 Comments
Shanduro iyi rinowedzera rutsigiro Geographic IP yakavakirwa vasabatwa iyo yave akumbira chinhu yokupedzisira mazera shoma (Kana dinos akatonga).
Sei munhu dzinoita rutsigiro vasabatwa ichi? It rinoshandisa kwazvo GeoIP vasabatwa plugin kubudikidza yellowtree.de. Mushure kugadzwa uye simba kuti Plugin kusarudza vachaonekwa pazviruva chete pasi ACCEPT_LANGUAGES Header yakavakirwa kuonekwa. The nani inowanikwa kuchaitawo kukuratidzai chii chichava mugumisiro nokuda kwako vasabatwa paunenge kuwana kwokubatsira Panel.
Uyezve vachitsanangura, vanozvitutumadza nzvimbo yako rakanyorwa Chirungu uye ane rutsigiro Spanish. A mushandisi kushanyirwa Spain, mutauro achapiwa redirected kuna Spanish (kubatana yechirongwa First). Kana munhu rokushandisa kushanyirwa Germany kunyange mutauro wacho kuona sezvo German sezvo mutauro haina kwakaita nzvimbo zvichaita Redirect kuti default shanduro.
Kana zvose nzira dziri akwanise, ari ACCEPT_LANGUAGES kutora yokutanga.
The Pakanzi Anotsigirwa zvose pamusoro vakasununguka uye wakazara Version.
Kana ukaona chinhu misredirection kana chikamu ichi anogoneswa (Rave kwenguva kwakaita pano kunovhenekwa) titendere kuziva nomukombiyuta kuonana fomu.
sezvo nguva dzose, tinotarisira uchanakidzwa shanduro iyi.
PS. Kana uri kushandisa vanekodzero azere shanduro uye update kusvika Newest zvizere shanduro haasi kuratidza (chete update kune vakasununguka shanduro) musazeza – ndiwedzere kutanga vakasununguka shanduro, ipapo pakarepo kutevera kuburikidza upgrading zvizere shanduro, hapana Kurongwa zvinofanira rasika.
Ina Under: Release zviziviso, Software Updates
mhando 1.0.0 – Nguva yasvika
Chikumi 16, 2018 kubudikidza chipo 6 Comments
Transposh kwave mupenyu yokupedzisira 10 makore kana kuti. Hatina kuramba vakachengeta plugin yoku- yedu yepaIndaneti pano, uye vakaedza nechokwadi kuti wordpress.org shanduro mabasa.
Sezvo shanduro Akakukurwa vega zvakava kuramba zvakaoma kuramba shanduro mbiri. Nokudaro wordpress.org shanduro vacho vangosiyiwa.
Izvi kuchinja kutanga nhasi kusunungurwa shanduro 1.0.0 pamusoro wordpress.org uye wakazara Version 1.0.0.1, ichazovapo mureza itsva pano (shanduro zvizere achapera zvimwe .1)
Ndezvipi kusiyana shanduro?
The wordpress.org shanduro ane 5 mutauro muganhu, uye hachisanganisiri Widgets.
The wakazara shanduro rine zvakawanda zvinhu, hapana mutauro nemiganhu, Widgets rutsigiro, uye Backlink wedu yepaIndaneti (zvamungadya vasarudze kubvisa – verenga mashoko)
Chii chimwe chitsva shanduro iyi?
Fully pamuedzo PHP 7, vanofanira kubvisa annoyances uye deprecation zviziviso
Source mepu rutsigiro mumanyoro dzedu, vachibvumira debug navo vakasununguka
Achitaurazve kubva FirePHP kuna Chromelogger.
Nakidzwa kushandisa shanduro iyi!
mhando 0.9.9.2 – Hapana Git
Gumiguru 5, 2017 kubudikidza chipo 32 Comments
Shanduro iyi yaiva yakareba ari kuita, hapana wo chinoshamisira pano, unocherekedza nokuti Wordpress 4.7 uye, zvimwe mitauro yakawedzerwa (117!)
Mamwe kugarisana unocherekedza uye inozivikanwa zvinhu.
Izvi vakatora nzira refu pane inodiwa nokuti taifanira chinja nharaunda kubva kare uye wakapinza svn itsva uye zvinovimbisa Git. Izvo chaizvo ndakavhiringidza pamwe resununguro ichi. Kutarisira kuti isu achasunungura shanduro itsva ine mapfupi nguva puranga.
Nakidzwa shanduro iyi.
mhando 0.9.9.0 – Vashandi zvenyika – batana!
Chivabvu 1, 2016 kubudikidza chipo 8 Comments
Nokuti rokutanga May, vashandi dzakawanda zuva hatina akazosunungurwa pakupedzisira kwazvo refu nonoka uye taitarisira shanduro 0.9.9.0.
Chii shanduro ichi chakanaka?
Chekutanga – rutsigiro Baidu, ari Chinese kutsvaka hofori idzo kuva neshanduro injini, pamwechete rutsigiro Cantonese kuri nani akasiyana kuti injini ichi. Chimwe chinhu chakanaka ndechokuti vane injini ichi, Websites vari raionekwa muna China kuwana kuwana kushanda rokushandura injini.
Chepiri – hatina ngadzirambe rutsigiro vose Google uye Yandex kuitika anokosha zvishoma, saka chaizvoizvo vanofanira kushanda zvakare ikozvino. Saka kana mapeji mashomanana yako nzvimbo havana rakashandurwa, shanduro itsva vacho iwe akafukidzwa. A mitauro shoma akawedzerwa pakuitika.
Chetatu – mijenya Kuchinja, kuwedzererwa uye tsikidzi unocherekedza kumativi ose. Hongu, tinofanira kugadzirisa mapepa uye FAQ vamwe.
Muchiri kuverenga izvi? Just ndiwedzere nhasi, uye basa mangwana!